တစ် ဦး ဘော်စတွန်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလကျန်ရစ်ဖို့တစ် ဦး ကနယူး ENGLANDER ရဲ့လမ်းညွှန် - နှုန်းထားများ
ငါဘော်စတွန်အပြင်ဘက်မှာကြီးပြင်းလာတယ်၊ ဒါကြောင့်ဆောင်းရာသီဟာငါ့အတွက်အမြဲမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ နှင်းငါးပေ? တစ် ဦး ပဝါဝတ်ဆင်။ သုညရဲ့အောက်မှာလေအေးနေသလား။ သင်၏လက်အိတ်ကိုမမေ့နှင့်၊
ငါ BU ကိုသွားချင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ Boston ဆောင်းရာသီတစ်ခုလုံးကငါ့ကိုလုံးဝမကြောက်ခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါဘယ်သူ့ကိုမှကြောက်လန့်နေတာလဲမသိဘူး။
ပထမ ဦး ဆုံးနှင်းကျတိုင်း, ကျောင်းဝင်းအဘယ်သူမျှမကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့မည်ပုံသိသောပြည့်စုံ shit ပြပွဲသို့လှည့်။ Tweets နှင့် Facebook status များသည်ဆီးနှင်းနှစ်လက်မကျော်ရှိသည့်နှင်းကျသောနေ့များအတွက်တောင်းဆိုသည်။ အစပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အရမ်းထိတ်လန့်သွားတယ်၊ ဒါဟာကမ္ဘာကြီးရဲ့အဆုံးမဟုတ်ဘူး၊
သင့်ရဲ့ရာသီဥတုအေးတဲ့ဂီယာအမိန့်ကိုနို ၀ င်ဘာလအထိစောင့်ဆိုင်းမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးရောင်းပြီးပြီ။ နွေရာသီတွင်သင်၏အင်္ကျီနှင့်ဘွတ်ဖိနပ်များကို ၀ ယ်ပါ။ ရွေးချယ်မှုနီးပါးကျိန်းသေပိုကြီးလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်တစ်ခါတစ်ရံမှာကုမ္ပဏီတွေဟာရာသီမရွေးအရောင်းအ ၀ ယ်ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်ဟာကိုယ့်ကိုကိုယ်ငွေအနည်းငယ်စုဆောင်းနိုင်တယ်။
သီးခြား Bean Boots ကိုဝယ်ပါ
ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့ကရုပ်ဆိုးနေပေမယ့် Bean ကိုဖိနပ်တစ် ဦး ဘော်စတွန်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအဘို့အသွားလမ်းဖြစ်၏။ သူတို့သည်ရေစိုခံ။ နွေးထွေးပြီးသင့်ကိုအမြဲတမ်းတည်မြဲစေသည် insulator တွင်လည်းမသုံးသောသူများသည်ပြိုလဲရန်ကောင်းမွန်သော်လည်းသင်ဆီးနှင်းများတွင် ၀ တ်ဆင်ထားပါကသင်၏ခြေထောက်သည်ရေခဲဖြစ်လိမ့်မည်။ သီးခြားထားသည့် Bean Boots သည်လျင်မြန်စွာရောင်း ထွက်၍ စျေးကြီးသည်။ သို့သော်ငွေသည်အမှန်ပင်တန်သည်။ ပြီးတော့လိုချင်တဲ့အချက်ကသူတို့ဟာအရွယ်အစားကြီး ၀ က်လောက်လောက်ရှိပုံရတယ်။
ပုံပေမယ့်လုံးဝငါ့ခြေထောက်: bean ကိုဖိနပ်
ဘော်စတွန်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည့်ရာသီဥတုအခြေအနေများနှင့်သင်၏ဂျာကင်အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ထားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ တခါတရံမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၊ နှင်းကျခြင်းနှင့်နှေးခြင်းများအားလုံးသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဖြစ်ပြီးသင်ထိုနေ့ရက်ကာလ၌သွေးကြောတစ်ခုလိုချင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင့်ကိုပါးပျဉ်းမရှိသောအင်္ကျီထက်သင့်ကိုသိသိသာသာပူနွေးစေလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်ဂျာကင်အင်္ကျီကိုရွေးချယ်သောအခါသင်၏ခါးအောက်၌ရှိသောအရာကိုရွေးပါ။ အဲဒါတစ်ခုတည်းကကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်။ မယုံကြည်သောကြောင့်ရေစိုခံသောဂျာကင်အင်္ကျီကိုသေချာစွာရှာဖွေပါ၊ ရေသည်အရည်ထဲသို့အရည်ပျော်သွားပြီးသင်၏အင်္ကျီကိုစိမ်ရန်မလိုပါ။
စိတ်မပူပါနဲ့၊ ကနေဒါနိုင်ငံက Goose ဟာနွေးထွေးတဲ့အင်္ကျီတွေကိုရောင်းတဲ့တစ်ခုတည်းသောကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါဘူး။ ပိုတတ်နိုင်သောရွေးချယ်စရာများအတွက် L.L. Bean, Patagonia သို့မဟုတ် North Face ကိုစစ်ဆေးပါ။
ကျနော့်အမြင်တွင်ပရာဖာများအလွန်အမင်း underrated ဖြစ်ကြသည်။ လက်ျာပဝါသည်အေးသောနေ့၌သင့်ကိုကယ်တင်နိုင်သည်။ Urban Outfitters များသည်ဆောင်းရာသီတွင်စစ်မှန်သောကောင်းချီးများဖြစ်သောစောင်ခြုံကြီးများကိုရောင်းချကြသည်။ သူတို့သည်တစ်ခါတစ်ရံအနည်းငယ်မိုက်မဲသောအရာများဖြစ်သော်လည်းအလုပ်ကိုအမှန်ပင်လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ပဝါကောင်းတစ် ဦး သည်သင်၏အင်္ကျီအတွင်းအပူကိုထိန်းထားနိုင်ပြီးသင့်မျက်နှာကိုရက်စက်သောလေများမှပင်ကာကွယ်နိုင်သည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ် fracket ရယူပါ
သငျသညျမဟုတ်ရင် frats များအတွက်ဂျာကင်အင်္ကျီအဖြစ်လူသိများတစ် fracket မပါဘဲရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ Allston တွားဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့လမ်းမရှိသောရှိပါတယ်-ငါအခုပြောနေတယ်။ အကယ်၍ သင်ဆုံးရှုံးလိုက်လျှင်၎င်းသည်အလွန်စျေးကြီးလွန်းခြင်းမရှိစေရန်သေချာစေပါ၊ သို့သော်သင်၏စနေ၊ Forever 21 တွင် Tobi နှင့် Amazon တို့သည်အလွန်အသုံး ၀ င်ပြီးတန်ဖိုးနည်းသော fracket options များရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အလွန်အသုံး ၀ င်သော်လည်းသင်ဆုံးရှုံးသောအခါတွင်သင်စိတ်ကျိုးပဲ့သွားလိမ့်မည်။
လူသစ်အမှားလုပ်ခဲ့သည့်နံပါတ်တစ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌စာပို့ခြင်းလက်ဝဲမထားခြင်းဖြစ်သည်။ Lululemon တွင်ရွေးချယ်စရာကောင်းသောနည်းလမ်းများရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုနေရာတော်တော်များများ၌ရောင်းချပြီးအမေဇုံတွင်ပင်ဒေါ်လာ ၁၂ ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းချကြသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဆောင်းတွင်းဗီရိုအပြင်သင့်လက်များကိုအပူချိန်နှင့်ထိတွေ့ခြင်းမှကယ်တင်နိုင်သည့်ရိုးရှင်းသည့်ထပ်ဆောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးတော့သင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုစာရိုက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်သီချင်းတစ်ပုဒ်ပြောင်းဖို့လိုတိုင်းအချိန်တိုင်းသင့်လက်အိတ်တွေကိုချွတ်စရာမလိုတော့ဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းပါပဲ။
နယူးအင်္ဂလန်ရာသီဥတုသည်ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ မရနိုင်ပါ။ အချို့သောနေ့များသည်အအေးမိလာကာနေပူလာသဖြင့်သို့မဟုတ်အအေးနှင့်အအေးများလာသဖြင့်တစ်နေ့တာအတွက်အခန်းမထွက်ခင်အပူချိန်ကိုသေချာစစ်ဆေးပါ။ အပူချိန်ကိုစစ်ဆေးခြင်းကမည်သို့ ၀ တ်စားဆင်ယင်ပုံကိုရှာဖွေရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ကြောင်းနှင့်အတူသောအခါ, သံသယအတွက်, အလွှာသာဝတ်ဆင်။ သငျသညျအစဉျအမွဲအလွှာကိုချွတ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်က - စားဆင်ယင်အောက်မှာလျှင်, သင်ကလွဲချော်နေပါတယ်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဆောင်းရာသီလေ့ကျင့်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်မှာဖက်ရှင်အပေါ်လက်တွေ့ကျမှုကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင့်လျော်သော ၀ တ်စားဆင်ယင်ခြင်းသည်သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်တော်တော်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပြီးမည်သည့်နေ့တွင်မဆိုသင်ကြည့်သည့်အရာအားမည်သူမျှအမှန်တကယ်ဂရုမစိုက်ပါ။